Yese nhau yeiyo nyowani HTC M10 | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Android, Kupikisana
Kwete chete kuti munhu anorarama achishandisa iyo iPhone uye seuchapupu hweizvi, isu tinosungirwa kuburitsa ruzivo rwakanangana neterminals ayo mamwe makambani anotanga pamusika, matunhu ekumusoro-soro ehe saizvozvo. Kana isu takambotaura nezve iyo Samsung Galaxy S7, ikozvino yave mukana weiyo nyowani HTC M10, chinongedzo chine iyo Taiwanese yakasimba inoda kuyedza kutsvaga nzvimbo pakati peakakwira-magumo maTerminal terminals. Sezvo HTC yakatanga M M, zvese zvishandiso zvagara zvakave nehurema hukuru (kamera, kudziya-kumusoro, kuita) izvo zvakundikana kutora kufarira kweruzhinji.
Iyo itsva HTC M10 inouya kumusika kuzoedza kukwikwidzana neiyo nyowani mureza weKorea yakasimba Samsung mukati meiyo Android musika uye zvakare neiyo iPhone 6s kunyangwe ivo vari pane imwe nhanho. Mukati meHCT M10 tinowana iyo Snapdragon 820 processor, ine 4 GB ye RAM uye yazvino vhezheni yeApple Marsmallow, 6.0.1.
Mukati medu tinowana 32 kana 64 GB yekuchengetedza yemukati iyo yatinogona kuwedzera maererano nezvatinoda kuburikidza neiyo micro SD kadhi slot. Iyo skrini inogara kumwe kunhu pakati peiyo iPhone 6s uye iyo iPhone 6s Plus, kubvira inotipa 5,2 inches ne resolution ye 2.560 x 1.440, nehukuru hwechikumbiro hwe564.
Sezvakaitika pazviitiko zvakapfuura, iyo HTC firm yakasarudza kushandisa BoomSound Hi-Fi edition maspika, ichiwedzera maviri masipika (kumusoro uye pasi) kuchinhu. Bhatiri, iyo Achilles chitsitsinho cheese mafoni aripo 3.000 mAh uye inotsigira Inokurumidza Charge basa kubva kuQualcomm, iyo inotibvumidza kuti tikurumidze kubhadharisa chikamu chikuru chebhatiri mumaminetsi mashoma.
Iyo yekumashure kamera yechigadzirwa inosvika iyo 13 MPX uchishandisa UntraPixel 2 tekinoroji ine kuzarura kwe f / 1,8 uko iko kudikanwa kwechiedza kwakadzikiswa zvakanyanya. Pamberi payo tinowana 5 MPX kamera inonyanya kuitirwa kutora selfies. Kana iri yemutengo wechigadzirwa ichi, HTC haizowana chero chinhu kana ikachengetedza mutengo wekutanga wemazana mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematatu euros yavakazivisa pakuratidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Dzese nhau nezve iyo nyowani HTC M10
Kusiyana kwebug kubva muna 1970 kunogona kuita zvidhinha zvine vhezheni yapfuura pane iOS 9.3.1